ထူးထူး (တောင်ငူ) – မတားပါနဲ့ ဆရာမရယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ထူးထူး (တောင်ငူ) – မတားပါနဲ့ ဆရာမရယ်
ထူးထူး (တောင်ငူ)၊ ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၄
အခု ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ စာရေးသူတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမည်၊ နိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူး…. မဟုတ်ရင် အဆောင်ကနေနှင်ထုတ်ခံရမည်၊ ကျောင်းထုတ်ခံရမည်၊ ကျောင်းသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကင်းရှင်းရမည် ဆိုပြီး ဆရာ၊ဆရာမ တွေကိုယ်တိုင် ပြောနေဆိုနေတာကို မြင်နေ၊ တွေ့နေ၊ကြားနေ ရတော့ စာရေးသူရင်ထဲ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာကြာပြီ…
စာရေးသူဟာ မြန်မာပြည်မှာတုန်းကလည်း စီးပွားရေး ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ၊ အခု နယူးဇီလန် ရောက်တော့လည်း စီးပွားရေးမှာ စာရင်းကိုင်ပညာ နဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ကို (အထူးပြု)ဆက်လက် သင်ကြားနေတဲ့ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။
အခုတော့ ဒုတိယနှစ် အတန်းတင်စာမေးပွဲကလည်း ဖြေပြီးသွားတော့ ရင်ထဲ ကျလီ့ ကျလီ့ ဖြစ်နေတာကို မနေနိုင်တော့လို့ ရေးပါရစေတော့… စာရေးသူဟာ ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သော ဆရာသမားများကို အမြဲ ကြည်ညိုလေးစားတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးပါ… ဆရာသမားများအပေါ်၌ ပြစ်မှား၊ စော်ကားလိုသော စိတ်ဆန္ဒ စိုးစဉ်းမျှမရှိတာ အမှန်ပါ…
ပညာရေး နှင့် နိုင်ငံရေး
မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမည်လို့ ပြောနေတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ များကို စာရေးသူ ရိုသေလေးစားစွာ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ ပညာရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ကင်းလို့ရလို့လား….
စာရေးသူ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ Waikato Institute of Technology (Wintec) ကျောင်းတော်ကြီး၏ Centre of Business က ဆရာ၊ ဆရာမ တွေကတော့ ဘာပဲသင်သင် နောက်ဆုံး နိဂုံးချုပ်တာကတော့ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ အဆုံးသတ်တာများပါတယ်။
ပထမနှစ်မှာ မသင်မနေရသင်ကြားရတဲ့ မော်ဂျူး (ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်) မှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဘာပဲ သင်သင် ဆရာမ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်သွားတာကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပါပဲ။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး (Macroeconomic) ကို သင်နေတဲ့ အချိန် ပိုတောင် ပါသေးတယ်… တစ်ချိန်လုံး အခု အာဏာရပါတီ (အစိုးရ) က ဘယ်လို မူဝါဒတွေနဲ့၊ ဘယ်လို စီးပွားရေးကိုလုပ်နေတာ… နိုင်ငံ၏ GDP( Gross Domestic Production) ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ (Gross National Expenditure) တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်တွေ၊ (Gross National Income) တစ်နှစ်တာ ၀င်ငွေ၊ နောက် အစိုးရ ဘတ်ဂျက် (Budget)၊ အစိုးရမှာ ဘတ်ဂျက် လိုငွေပြနေလား ဒါမှမဟုတ် ပိုငွေပြနေလား… ငွေကြေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Monetary Policy ကို ကျင့်သုံးနေတာလား၊ (သို့) Fiscal Policy ကို အသုံးပြုနေတာလား…. ဒါတွေကို သင်နေတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံရေး မပါလို့ရမလား….
စာရေးသူတို့ရဲ့ နယူးဇီလန်သူ (Kiwi) ဘောဂဗေဒ ဆရာမကတော့ တစ်ချိန်လုံး အစိုးရ Websites တွေကို ၀င်ဖတ်ဖို့၊ လေ့လာဖို့၊ အစိုးရ ဘာလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုမူဝါဒတွေ ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပြောပြတယ်၊ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း လေ့လာခိုင်းတယ်… အင်တာနေရှင်နယ်လ် ကျောင်းသားတွေကို တောင် နယူးဇီလန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးကို လေ့လာဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းတယ်… “မင်းတို့တွေ ဘွဲ့ရဖို့ အနည်းဆုံး (၃) နှစ် နယူးဇီလန်မှာ နေရမယ်… အဲ့ (၃)နှစ် အတွင်း နယူးဇီလန် ဘာဖြစ်နေတယ်… ဘယ်ကို သွားနေတယ် ဆိုတာ မင်းတို့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်… ဒီနိုင်ငံသား ကျောင်းသားတွေဆို ပိုလိုတောင်ဆိုင်သေးတယ်… မင်းတို့ရဲ့ မဲတစ်ပြားကို ဘယ်သူ့ကို ပေးမလဲ… ဘာကြောင့်လဲ… မင်းတို့ မဲပေးမယ့် ပါတီ၊ ခေါင်းဆောင် ဘာလုပ်နေလဲ… ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ… ဒါတွေကို မင်းတို့စိတ်မ၀င်ဘူးဆိုရင်တောင်… ဒါတွေက မင်းတို့ကို တိုက်ရိုက် ပက်သက်လာလိမ့်မယ်… လုံးဝရှောင်လို့မရဘူး… စိတ်ချ…. ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့၊ ဒီနိုင်ငံကထွက်တဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေရဲ့ ပိုင်ရှင် အစစ်ကမင်းတို့တွေ…
မင်းတို့ မိဘတွေ၊ အဖိုးအဖွားတွေ ရဲ့ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဒီအစိုးရ လည်ပတ်နေတာ… မင်းတို့ ပိုက်ဆံကို ကိုင်နေတဲ့သူတွေ၊ မင်းတို့ပိုင်တဲ့ သယံဇာတတွေကို စီမံခန့်ခွဲ နေတဲ့ သူတွေ အကြောင်းကို သိအောင်လုပ်ရမှာ… အဲ့လူတွေ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ မဟုတ်ရင် ကန့်ကွက်ရမှာ… ထောက်ပြရမှာ… လိုအပ်ရင် မဲလုံးဝ မပေးရမှာ… အဲ့ဒါ မင်းတို့တာဝန်” ။
ဆရာမရဲ့ ကျောင်းခန်းတွင်း ပို့ချနေတဲ့ သင်ခန်းစာ တွေသည်ပင်လျှင် နိုင်ငံရေးနဲ့ မကင်းပါဘူး။ ကိုယ့်တပည့်ကို တကယ်တော်စေချင်လို့၊ တတ်စေချင်လို့ စေတနာအပြည့်နဲ့ ပြောနေတယ်၊ သင်နေတယ်ဆိုတာ ကျောင်းသားတိုင်းနားလည်တယ်…
နားလည်လို့လဲ လက်ခံသင့်၊မခံသင့် ကျောင်းသားကစဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ ဒါဟာလုံးဝ အမှန်တရားကြီး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျောင်းသားတွေက ဆရာမပြောတာကို လက်ခံတယ်… ဆရာမ ပြောတဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လေ့လာကြတယ်… ဆရာမ ကို ပိုပြီးလေးစားမိလာတယ်…
ကီဝီဆရာများ နဲ့ မြန်မာဆရာများ
စာရေးသူတို့ ကျောင်းက ဘောဂဗေဒဘာသာရပ်သင်တဲ့ (Kiwi) ဆရာမကတော့ တပည့်တွေ နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စားမှာ စိုးရိမ်လို့ လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းသလို… ပြီးခဲ့တဲ့ ပထမနှစ် အတန်းတင် စာမေးပွဲ ဖြေခါနီး ကျောင်းသားတွေဆီ e-mail ပို့တယ်… နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂျွန်ကီး အခု တောင်ကိုရီးယားရောက်နေတယ်… တောင်ကိုရီးယားနဲ့ နယူးဇီလန် Free Trade စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတယ်…. ဘယ် Websites တွေကို ၀င်ကြည့်ပါ…. နယူးဇီလန်အတွက် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ… လေ့လာပါ။ ဘယ်နေ့ည၊ ဘယ်အချိန်မှာ နယူးဇီလန်လွှတ်တော်မှာ ဒါကိုဆွေးနွေးမယ်… အဲ့ဒါ ဘယ်အချိန်မှာ တိုက်ရိုက် လွှင့်မယ်… ဘယ်နေ့မှာ ဟိုက်လိုက် ပြန်လွှင့်မယ်… သေသေချာချာ ကြည့်ပါ…. အဲ့ဒါ ငါမင်းတို့ကို စာမေးပွဲမှာအမှတ် (၂၀) ဖိုးမေးမယ်ဆိုပြီး e-mail ပို့လာပါတယ်…
စာရေးသူပြောချင်တာက ကျောင်းကသင်တဲ့စာကို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်၊ လူမှုဘ၀ထဲမှာ ပြန်အသုံးချနိုင်ဖို့ ဆိုရင် ဒီသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ခန်းစာတွေ၊ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေဟာ လက်တွေ့လောကနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့ လိုမယ်လို့ထင်သလို၊ သင်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမ တွေကလည်း ကျောင်းသားကို လက်တွေ့ဘ၀ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေနဲ့အမြဲထိတွေ့နေအောင်၊ စာတွေ့ နဲ့ လက်တွေ့ ချိန်ထိုးကြည့်တတ်အောင်တိုက်တွန်းဖို့ လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တခြားဘာသာရပ်သင်တဲ့ ဆရာတွေလည်း သင်ခန်းစာသင်နေရင်းနဲ့ကိုပဲ နိုင်ငံရေး ကပါ ပါလာတာပါပဲ… ရှောင်လို့မရပါဘူး။
မြန်မာပြည်က ဆရာ၊ ဆရာမ အများစု ကတော့ နှမ်းတစ်စေ့နဲ့ ဆီမဖြစ်ပါဘူး ဆိုတာကို ခေါင်းထဲ စွဲနေပုံရတယ်…
ဒီလောက် ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာ၊ တိုင်းပြည်အရေးကို စိတ်ပါလက်ပါ လေ့လာဆောင်ရွက်တာ… ဒါတွေဟာ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက် ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ…. ဒါတွေကို မလုပ်အောင်၊ ရပ်တန့်အောင် လုပ်နေတာတွေဟာ(ခြိမ်းခြောက်နေတာတွေဟာ) တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေလား…
ဒါမှမဟုတ် ကြောက်လို့လုပ်နေတာတွေလား…. ကြောက်လို့လုပ်တာဆိုရင်… လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကလည်း ပြောထားတယ်… အမှန်တရားအတွက် မကြောက်ပါနဲ့… ခေတ်တွေပြောင်းသွားပါပြီတဲ့…
ဒီမျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားတွေ ဟာ တစ်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်တာဝန်တွေကို ပခုံးထမ်းသယ်ပိုး ဆောင်ရွက်မယ့် အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလေ … သူတို့တစ်တွေ နိုင်ငံရေး ကို စိတ်ဝင်စားလေလေ…
သူတို့တစ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ စဉ်းစား ထိုးထွင်း သိမြင်တဲ့ ဥာဏ်တွေ ထက်လာလေလေ… စာရေးသူတို့ အမိ မြန်မာပြည်ကြီး နောင်ရေး စိတ်အေးရလေလေပေါ့ဗျာ… မဟုတ်ဘူးလား…
ဒါမှမဟုတ် စစ်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ် တတ်နေတဲ့ သားတော်မောင်အတွက်လား…. အိမ်ဦးနတ်က တပ်ရင်မှုးမို့လို့လား…. ရာထူးတတ်ချင်လို့လား….. အဲ့ဒါဆိုလည်း စစ်တက္ကသိုလ် ကိုသာ ပြောင်းသွားပြီး အဲ့မှာ စိတ်ပါ လက်ပါ သင်ကြားပါလို့…
ဆရာမရယ် မကူညီချင်နေပါ… မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ပါရစေ….။
2 Responses to ထူးထူး (တောင်ငူ) – မတားပါနဲ့ ဆရာမရယ်
Htwe Paing on June 25, 2014 at 7:54 am
I am strongly agreed with you. They don’t deserve to be our teachers (I don’t’ meant who have been teaching us inaproper way).
Yeah, they should go and teach in military.
If you don’t want to no need to help, but please DO NOT bother
Soe myint on July 7, 2014 at 11:25 am
It’s absolutely right what you said. I totally agreed with you.